1. Traditional Beach Fale - Matareva Beach Fales - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e inqugwala sinombuki zindwendwe onguFiauu
Kuphela i-45 m ukusuka kwi-Airport kunye ne-1h ukusuka e-Apia, sinikezela ngendawo yokuhlala yabantu, izibini kunye neentsapho. Isidlo sakusasa kunye nesidlo sakusihlwa zibandakanyiwe kwaye isidlo sasemini sinokuthengwa. Ikofu yasimahla kunye neti ziyafumaneka imini yonke. Indawo yethu yaselwandle ibonelela ngokutya kunye neziselo.
Imisebenzi emininzi iyafumaneka kwisiza, kunye nomdaniso womlilo weveki / umboniso wenkcubeko, umqolomba we-lava oneminyaka engama-700 kunye ne-Umu yemveli ngeempelaveki. Ngaphaya koko, ukhenketho, (ubusuku) ukuhamba nge-snorkeling, i-kayaking, ukusefa kunye nokunye okuninzi kunokwenziwa kwindawo.
Yonwabela ixesha lakho eMatareva Beach ekuthuthuzelekeni kwendawo evulekileyo yaseSamoan Beach Fale. Isidlo sakusasa kunye nesidlo sangokuhlwa zibandakanyiwe kwixabiso legumbi kwaye isidlo sasemini sinokuthengwa ngesicelo.
Igumbi eliphangaleleyo nelivulekileyo libekwe ngokuthe ngqo kulwandle lwethu oluhle kwaye libandakanya umbono omangalisayo wolwandle kwigadi yethu yaselwandle ekhuselweyo yekorale. Igumbi lifakwe lula ukuvala izivalo, oomatrasi abanelinen entsha yokulala, inethi zeengcongconi, iitawuli kunye nokufikelela kwiindawo zokuhlambela ekwabelwana ngazo.
Isilayi separadesi apho unokuphumla khona kolunye lolona lwandle lubalaseleyo lwesanti emhlophe eSamoa kunye ne-snorkel kwigadi yethu yaselwandle ekhuselweyo yekorale.
Umbuki zindwendwe ngu- Fiauu
Nantoni na oyifunayo masazise nje. Abasebenzi kunye nabaphathi bakhona.